Dr. Mukwege avy ao RDC : ‘Ahoana no Fangina’ Rehefa Miatrika Herisetra Ara-Nofo? · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 23 Desambra 2014 22:14 GMT
Vakio amin'ny teny Español, English, čeština , русский, Türkçe, Ελληνικά, Français
Afisin'ny Dr. Mukwege miresaka ny fiadiana amin'ny herisetra ara-nofo ao amin'ny RDC
Resaka fahatongavan'ny fotoana hankatoavana ny Dr. Denis Mukwege noho ny asany. Vao haingana izao no nahazo loka maro ny hafanam-po naharitra 15 taona nataon'i Mukwenge ho fanasoavana ireo lasibatry ny herisetra ara-nofo ataon'ireo mpifanandrina mitam-piadiana ao amin'ny faritanin'i Kivo ao amin'ny Repoblika Demaokratikan'i Congo.
Raha efa nahazo ny Loka 2013 an'ny Fondation Chirac noho ny fisorohana ny fifandirana, dia nahazo ny loka Sakharov 2014 ihany koa izy tamin'ny Andro Iraisampirenena Hamongorana ny Herisetra atao amin'ny Vehivavy. Indro ny lahatsarin'ny kabariny tamin'ny lanonana fanomezan-doka tao Strasbourg, Frantsa:
Nandritra ny kabarim-panekena nataony, maro tamin'ireo mpikamban'ny parlemanta eoropeana no tsy nahatana fa nirotsa-dranomaso. Indro ny nisongadina avy amin'ny kabary araka ny namadihan'ny blaogy Kôngôley Kamoto centre azy:
Tahaka ny olombelona rehetra, ny faniriana tiako indrindra dia ny tsy hiresaka intsony ireo heloka bevava mahatsiravina, izay maha-lasibatra ny oloko. Fa hatao ahoana no fangina rehefa, nandritra ny 15 taona, no nahita zavatra fa na dia ny mpandidy aza tsy zatra mijery izany? Ahoana no fangina, rehefa fantatsika fa ireo heloka bevava atao amin'ny olombelona dia tarihin'ny fandaharam-potoana ara-toekarena bontolo? Ny vehivavy tsirairay voaolana, dia fantariko amin'ny vadiko; ny reny tsirairay voaolana dia jereko ho toy ny reniko, ary ny ankizy tsirairay voaolana tahaka ny zanako naterako. Ahoana no ahafahantsika mbola mangina?
Ahoana no ahafahan'ny olombelona nomena feon'ny fieritreretana hangina, rehefa mahita fivavian'ny enimbolana potiky ny fanaovana an-keriny?
Dokotera Mukwege ao amin'ny hopitaly Panzi ao RDC
Ny asa voalohany ataon'ny Dr. Mukwege amin'ireo lasibatry ny herisetra ara-nofo dia mifototra ao amin'ny Hopitalin'i Panzi ao Bukavu, tanàna lehibe indrindra ao amin'ny faritra Kivu. Atao salan'isa dia mampiditra marary 410 isam-bolana ny Hopitalin'i Panzi izay manana farafara 200 natokana hoan'ireo lasibatry ny herisetra ara-nofo. Iray amin'ireo mpiasa ao Panzi, Prince Muhrula, mamelabelatra fa ao amin'ny hopitalin'i Panzi, ny vehivavy dia afa-miaina indray sy mankafy ny fiainana tsotra rehefa miverina amin'ny laoniny ny fahamendrehan'izy ireo :
Nentanin-kafaliana tamin'ny nandraisana an-tanana ny fikarakaran'ny Parlemanta Eoropeana tamin'ny alalan'ny dokotera Denis Mukwenge ao amin'ny hopitalin'i Panzi ireo nahazo takaitran'ny herisetra ara-nofo. Taorian'ny loka Sakharov nomena ny tale-mpitsabo ao Panzi, dia nihorakora-pifaliana teo an-tokotanin'ny hopitaly ireo vehivavy maro ireo ho fanohanana ilay mpitsabo. Hoan'ireo vehivavy ireo dia fampaherezana lehibe izany :
“Manaporofo io fa tsy noadinoina izahay, fa tsy manakimpy maso manoloana ny mahazo anay ny ambin'izao tontolo izao,” hoy ny vehivavy iray nahazo takaitra tanaty fifaliana. Ao anatin'ny dobodoboka sy ny hiram-pifaliana ireo vehivavy ireo no nidera ny asa vitan'ny dokotera Mukwege izay tsy mihanona fotsiny amin'ny fitsavoana rattra fa mitady ihany koa ny hanome lanja ny vehivavy mba hiverina aminy ny fahamendrehany.
Indro ny sombin'ny [lahatsary] fanadihadiana momba ny asan'i Mukwenge ao amin'ny faritra Kivu:
Tsy ankatoavin'ny rehetra anefa na izany aza ny asany. Efa imbetsaka ireo vondrona mitam-piadiana no nandrahona azy. Tamin'ny 25 Oktobra 2012, izy no nisy nanafika tao an-tranony, ary maty nandritra izany fanafihana izany ny mpiasa an-tranony. Tamin'ny Jona 2013, nisy mpanampy mpitsabo avy ao amin'ny hopitaly niasany voatafika. Indro ny antsipirihany hita ao amin'ny pejy Facebook an'ny hopitalin'i Panzi :
Hita tsy tafahetsika eo amin'ny rindrin-trano ampitan'ny Tanànan'ny hafaliana ao Panzi ihany Rtoa. Furaha Lugumire, mpanampy mpitsabo ao amin'ny Hopitalibe Panzi ao Bukavu, ny alin'ny 21 hifoha 22 jona 2013 tamin'ny sasakalina sy telo minitra. Araka ny nolazain'ny polisy iray anisan'ny niandraikitra ny fahadihadiana dia hita nifatotra gadra-vy tanana an-damosina ilay lasibatra, niaina izy fa tsy afa-niteny. NIlaza izy fa teo anilan'ny lasibatra dia nisy harona plastika misy alikaola. Nampidirina tao amin'ny hopitalin'i Panzi moa Rtoa. Furaha Lugumire amin'izao fotoana, ary mpitsabo manokana maro avy ao amin'io sampan-draharahan'ny fitsaboana io no mitsabo mamakafaka ny momba azy.
Ao amin'ny Cafe Babel, bilaogy iraisin'ireo mpiteny frantsay, Clara Fajardo Trigueros manazava ny antony mahatonga ny faritr'i Kivu hanana loharanon-karena goavana sy miteraka fifandirana politika tahaka izany:
Coltan no iray amin'ny fanalahidy manazava ny antony mahatonga ny fiainana any Congo ho lasa afobe akehitriny. Mitahiry ny 80 isanjaton'ny tahirin'ity harena ankibon'ny tany ity izy. Fa mety azo atao ho fanavotana azy ihany koa io. Ilay vato izay natao ho karazam-pahalalàna tamin'ny fotoana hafa no lasa kitro ifaharan'ny fitaovana ara-teknolojia.
Maro amin'ny mpisera aterineto no te-hahita ny asan'i Mukwege hahazo ny loka Nobel. Efa misy ny pejy Facebook, “We want a Nobel Peace Prize for Dr Denis Mukwege“, [mitaky Loka Nobel hoan'ny dokotera Denisy Mukwege izahay] natsangana ho amin'izany faniriana izany.